FBC - Abbootiin-qabeenyaa Tarkii Itiyoophiyaatti damee humna danfa lafa keessaa irratti bobba’uu akka barbaadan ibsan
Abbootiin-qabeenyaa Tarkii Itiyoophiyaatti damee humna danfa lafa keessaa irratti bobba’uu akka barbaadan ibsan
Finfinnee, Bitootessa 07, 2009 (FBC) Abbootiin-qabeenyaa Tarkii Itiyoophiyaatti humna danfa lafa keessaa fi hojii seraamikii oomishuu irratti bobba’uuf fedhii akka qaban ibsan.
Abbootiin-qabeenyaa kunniin guyyaa kaleessaa Waajjira pireezdaantiitti Pireezdaant Mulaatuu Tashoomaa waliin mari’ataniiru.
Abbootiin-qabeenyaa kunniin humna danfa lafa keessaa, gogaa fi bu’aalee gogaa akkasumas hojii seraamikii irratti bobba’uuf fedhii qabu.
Deggarsa Itiyoophiyaan kana dura abbootii-qabeenyaa Tarkiitiif taasiste fi hojjataniis hojiisaaniin milkaa’uunsaanii hojii invastimantii kanaarratti akka bobba’an caalaa isaan kakaasuusaaf akka sababaatti eerameera.
Itiyoophiyaatti Ambaasaaddarri Tarkii Faatiih Yulusooy daawwaannaa Pireezdaant Mulaatuun ji’ootaan dura Tarkiitti taasisan abbootiin-qabeenyaa kunniin gara Itiyoophiyaa akka dhufan sababoota taasisan keessatti kan eeramu ta’uu himaniiru.
Pireezdaant Mulaatuun gita isaanii Tarkii Reesib Xaayib Erdoohaan waliin wayita mari’atanitti hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf waliigaluunsaanii kan yaadatamudha.
Wayita ammaa wal-jijjiirraan daldalaa Itiyoophiyaa fi Tarkii gidduu jiru Doolaara Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 40 irra ga’eera.
Haata’uutii lakkoofsa kana gara Doolaara Ameerikaa biliyoona 1tti guddisuuf biyyoonni lamaan waliigalaniiru.
Tarkiin Baha Afriikaatti hojii invastimantii Doolaara biliyoona 6 hojjataa akka jirtu kan eeran Ambaasaaddar Yulusooy, isa keessaa Doolaari biliyoona 2.5 Itiyoophiyaa keessatti qofa hojiirra oolfamuusaa himaniiru.
Kunis Itiyoophiyaatti lammilee kuma 30 ol ta’anii carraa hojii uumuusaa ibsaniiru.
Pireezdaant Mulaatuu Tashoomaa gamasaaniin, abbootiin-qabeenyaa kunniin dameelee invastimantii barbaadan irratti yoo bobba’an bu’a-qabeessa akka ta’an isaanii ibsaniiru.
Oduuwwan Biroo « Siimpooziyamiin dhaabbata aviyeeshinii idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffama	Naannichatti dargaggoonni kuma 8 ol hojii albuuda oomishuu irratti bobba’an »